RAIM-PIANAKAVIANA NISY NAMONO
Nisy namono ny lehilahy iray, raim-pianakaviana izay nandeha namonjy fiandrasam-paty.
Tetsy Namontana no niseho izany ary nihorohoro ny mponin’Anosibe iray manontolo raha nahita ny razana vao maraina. Teo akaikin’ny tanimboly no hita izany ary efa nikirozaroza ny tendany. Manambady ary manan-janaka roa ilay olona novonoina. Ankoatr’izay dia fantatra fa vola latsaky ny iray alina ariary miampy radio kely mba fihainoan’ilay rangahy no tsy hita teny aminy intsony.
VITSY LOATRA NY KANDIDA
Kivy hatramin'ny CENI ankehitriny mahakasika ny fifidianana Ben'ny tanàna izay hatao atsy ho atsy. Sarotra ny mamolaka ny fisainan'ireo mpirotsaka hofidiana ny mba hametraka ny taratasy mialoha fa tsy miandry farany foana, raha araka ny fanamarihan’izy ireo. Ny alakamisy izao no fe-potoana farany kanefa hatreto dia hita miandry ora farany hatrany ny olana..
HAFANA KELY NY ANDRO
Izay vao hanomboka hafanafana kely ny andro, hoy ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Efa mihamisinda ny hatsiaka saingy any amin'ny volana oktobra any mihitsy vao tena hifarana ny ririnina. Volana novambra kosa vao hiditra ny fotoam-pahavaratra. Izany rehetra izany dia mbola vokatry ny fikorontanan’ny toetry ny andro vokatry ny fahasimban’ny tontolo iainana. Isika dia anisan’ny tena mizaka izany satria betsaka tavy sy fanimbàna hazo kanefa tsy mamboly na mamerina izay simba.
Vao mianatra mampiasa solomaso mihitsy ny filoha ka tena hita sahirana mihitsy mampiasa azy. teo am-panaovana kabary fisaorana ny vahoaka Malagasy izy no hita fa mbola mitavozavoza nanao azy. Asa na zesta na tena aretimaso tokoa moa izy ity.
Niakatra ambony be ny isan'ireo mpiadina tsy tonga niatrika ny fanadinana Bepc. Efa manodidina ny telo arivo no tsy tonga manerana ny nosy. Tao amin’ny lisea Ampefiloha dia efa tafikatra 271 ireo mpiadina izay tsy tonga. Ny tsy fahavitan'ny ray aman-dreny ny fandoavana ny ekolazy hatramin'ny farany ka tsy nahazoan'ireo mpianatra taratasy fiantsoana no anisan’ny antony. Efa ho 11 volana mantsy ny taom-pianarana tamin’ity ka marobe no tsy nahaloa intsony. Mampalahelo tanteraka ny ankizy malagasy…
KANDIDA I FERNAND CELLO
Nametraka ny taratasy filatsahan-kofidiana ho ben’ny tanàna ao Ilakaka ny mpanao gazety Fernand Cello. Io farany izay anisan’ny narovan’ny fianakaviambe iraisam-pirenena, indrindra fa ny vondrona eoropeanina noho ny fahasahiany namoaka ny tsy mety tamin’ny haino aman-jery, mahakasika ny fitrandrahana tsy ara-dalàna tao an-toerana. Nohidina am-ponja mihitsy ny lehilahy tamin’izany fotoana ary nandritry ny fotoana ela. Ankehitriny izy dia nanana fijery politika izay miady amin’ny tsy rariny ka nahatonga azy hilatsaka ho ben’ny tanàna.
Miverina sahady ny fitohanan’ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra omaly. Niditra ny mpianatra ary tsy vitan’izay fa ireo izay namboarina dia mbola misy tsy fahatomombanana ary notohizana indray ny fikitihana. Efa ho tapa-taona izay ny olona teto an-drenivohitra no niaritra ny fanamboarana sy ny fitohanana. Ny mampalahelo dia efa misy amin’ireo làlana vita no efa miverina ho simba sahady indray.